Shiinaha Kosher Gelatin warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Kosher gelatin wuxuu soo bandhigi doonaa midab huruud ah oo khaas ah marka la kala diro. Sifadaani waxaa lagu hagaajin karaa daaweynta kuleylka inta lagu jiro makiinada. Tiknoolajiyadda casriga ahi waxay awood u yeelatay inay soo saarto gelatin madmadow. Kosher gelatin leh ballaarin sare waa hufan. Gelatin-kani waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabooyinka aan rabin in midab lagu farageliyo.
Soosaarka Gelken Kosher Gelatin si adag ayaa loo xakamayn doonaa si loo hubiyo in alaabada ceeriin iyo alaab-qeybiyeyaashooda si taxaddar leh loo xushay. Dhammaan alaabta ceeriin ee loo isticmaalo soo-saarka gelatin si adag ayaa loo tijaabin doonaa si loo hubiyo tayada ugu fiican, badbaadada iyo raad-raaca.
Sababtoo ah asal ahaan dabiiciga ah, gelatinkeena kosher waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cunno halkii lagu dari lahaa dalal badankood. Tusaale ahaan, Yurub, gelatin ma laha E-koodh.
Intaa waxaa dheer, ma jiro transgene, xasaasiyad iyo ma laha calaamadda kolestaroolka ee gelatin
Gelatin wuxuu ku dhalaalaa heerkulka jidhka, taas oo siisa dhadhan weyn, taas oo ka dhigaysa xulashada ugu habboon ee macmacaanka sida marshmallows, marshmallows, marshmallows iyo waxyaabo kale oo badan oo caano laga sameeyo, hilib iyo macmacaan.
Ilaha dabiiciga ah, xasaasiyad male, gebi ahaanba ku habboon isticmaalka aadanaha, sidaas darteed sidoo kale waa daaweyn kaamil ah iyo cilmiga noolaha ee daawada.
Dib u noqoshada kuleylka, waxay ka dhigan tahay in kuleylku isu rogi karo dareere, qaboojiyaha ayaa jel kara, mana la burburin doono marar badan.
Dareenka hufan, dhadhan la'aan, markaa waxaa looga baaraandegi karaa dhadhammo kale ama midabbo.
Hore: Gelatin looxa
Xiga: Gelatin doofaarka